Miswe, iyo yakachengeteka sisitimu yekushandisa yekutsvaga iyo Yakadzika Webhu | Kubva kuLinux
Miswe, yakachengeteka kwazvo sisitimu yekushandisa yekutarisa iyo Yakadzika Webhu
Miguel | | Kugoverwa
Sezvo angangoita wese munhu anoziva zvishoma nezve komputa yezvose anoziva, Linux Iyo yakachengeteka kwazvo sisitimu yekushandisa, asi dzimwe shanduro dzayo zvakanyanya kudaro. Ndosaka patichazofamba nenzira iyo nzvimbo dzinotyisidzirwa dzakawandisa, senge iyo Yakadzika Webhu, chinhu chakakodzera kwazvo kushandisa sisitimu yakachengeteka kwazvo iripo, uye izvi hazvisi zvimwe Miswe (yakakurudzirwa kunyangwe naEdward Snowden). Izvo zvinofanirwa kusimbiswa kuti iyi OS haina pachayo inotivimbisa kuti tichava 100% inodzivirirwa pakurwiswa kupi zvako, asi yakawedzerwa kuruzivo rwedu rwezvakatipoteredza nedosi inodiwa yekuziva, inomiririra mukana wakakura uchienzaniswa nechero ipi system inoshanda yatinoshandisa.
Miswe () Iyo Amnesic Incognito Live System) akazvarwa chaizvo kubva kunetsekana kwevashandisi nemakambani nezvekuwedzera kunotyisa kwemarware uye spyware, nekumwe kugadziridzwa uye maturusi akasiyana siyana uye zvirongwa zvekuchengetedza zvatingaite shandura komputa yedu ive nhare chaiyo. Yakavakirwa pa Debian 6 (imwe yeakagadzika uye akaomarara shanduro dzeLinux) uye zvinotibatsira, pakati pezvimwe zvinhu, kufamba nenzira isingazivikanwe, kudzima matragi edu uye kunyorera data, zvese zvishandiso zvekutanga kuchengetedza zvakavanzika. Nekudaro, iyo ingangove chinhu chayo chikuru ndechekuti haina kumbonyora kune rakaomarara diski, asi mu RAM chete, kuitira kuti data redu risatombochengetwa pakombuta, asi zvinodzimwa zvachose pese patinoidzima.
Yako default browser ndeye Iceweasel, iyo, zvingave sei neimwe nzira, inoshandiswa seinjini yekutsvaga Tor, iyo yaunofamba nayo iyo Yakadzika Webhu. Uye zvakare, iyo bhurawuza ine mamwe plugins akadai se Dzinga, Keyringer, PaperKey o Nguruve, iko iko kutumira mameseji application, yakagadzirirwa kushandisa OTH (Kunze-iko-kurekodhi-kutumira mameseji, kuitira kuti hurukuro dzive 100% dzakavanzika). Iyo zvakare ine zvimwe zvishandiso zvekuda kuziva, senge iyo camouflage mode iyo inoshandura yayo yakajairwa Gnome chitarisiko kutaridzika senge Windows uye nekudaro inotidzivirira isu kubva prying maziso. Izvi, zvakasanganiswa nemamwe maturusi, zvinotipa dziviriro yakanakisa yekufamba nemhando iyoyo yemusango kumadokero ndiyo webhu yakadzika.
Kuti tishandise isu tine akati wandei sarudzo, senguva dzose. Tinogona kuimhanya kuburikidza neyekunze USB diski, memori kadhi kana kuirekodha paDVD, hapana chikonzero chekuiisa. Asi kune zvakare iyo inogoneka vhezheni yechokwadi. Pawebhusaiti yepamutemo tinogona kurodha chero vhezheni ne digital signature (zvingaite sei neimwe nzira), yakavharidzirwa neOpenPGP, iyo inotibvumidza kuti tione kuvimbika kwefaira. Isu tinokusiya iwe link kune yepamutemo webhusaiti, kubva kwaunogona kuenderera kuodhaunira:
Miswe yepamutemo webhusaiti
Chekupedzisira, inofanira kusimbiswa kuti Miswe haisi iyo chete sisitimu yekushandisa kune avo vanoda kufambisa iyo Yakadzika Webhu, kana zvisiri ipapo chero mutapi venhau, blogger kana munhu anoda kuchengetedza kusazivikanwa chaiko uye chengetedzo paanenge achivhura, kurodha pasi kana kutumira data kuburikidza neinternet. Nezvikonzero zvakafanana, zvinobatsira zvakare kushandisa internet munzvimbo dzinowanikwa vanhu kana kana tichienda parwendo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Miswe, yakachengeteka kwazvo sisitimu yekushandisa yekutarisa iyo Yakadzika Webhu
Ndangariro iyoyo yakaiswa nehurongwa inogara ichindiponesa
Yakanaka kwazvo posvo!
Mumwe munhu anogona kutsanangura, nei Iceweasel browser ine Tor muTails system, iine Diski Yekutsvaga injini yekutsvaga yakagadzirirwa nekumisikidza, iyo kana ukaisa izwi rekuti "kubva ku linux" rinobuda zvaro riine chekuita negoogle?
Iwe haugone zvirinani kugadzirisa iyo Tor Iceweasel browser neDuckDuckGO yekutsvaga injini uye iwe unobvisa otomatiki kubatana negoogle?.
Iwe unogona kutaura pamusoro penyaya dzine chekuita ne "nhau" dze digital peji usingarasikirwe nekusazivikanwa kwako? Kana iwe uchida kupinda muFacebook neiyi Iceweasel browser kubva kuTor ... haingokutenderi iwe uye inokukumbira kuti upindure bvunzo remibvunzo ku iyo poindi kana iwe ukakanganwa iyo account yakangovharirwa uye haugone kupinda Facebook zvakare, chero mhinduro yeiyo?
Chii chinoitika nemubvunzo chiratidzo (!) Mune tsvuku ... iri muchikamu chepamusoro kurudyi chebhurawuza? Zvinoreva here kuti iwe unoita imwe yekumisikidza kuitira kuti Flash Player kana Java script plugin isakuone?
Injini yekutsvaga ine chekuita nekuvharira Facebook, kana iwe ukashandisa google zvakananga pasina injini yekutsvaga saka google ichati uri kushandisa injini yekutsvaga nenzira yekufungidzira uye kuti unofanirwa kutarisa kuti ndiwe uri kushandisa injini yekutsvaga, iyo chinhu chimwe chete chinoitika neFacebook, kuti Kana vakaona kuti iwe unopinda mune imwe nzvimbo yenzvimbo kupfuura zvakajairwa, vanofungidzira kuti account yako yakabiwa uye unofanirwa kuona kuti ndiwe zvechokwadi urikuedza kupinda mukati kwete mutorwa akakwana .
Kana iri yekutsvaga injini, iwe unogona kuichinja nekutamba neiyo IceWeasel zvaunofarira.
Solrak Raimbowarrior akadaro
Makomendi akaongororwa ...
Pindura Solrak Raimbowarrior
Musoro wacho wakada kuita yero nekuda kweiyo yeWebhu Webhu, kunyanya nekuti pakupedzisira unojekesa chaizvo kuti kwete chete iyo bhurawuza inoshandiswa izvo, asi hei, ndinonzwisisa kupera kwechinyorwa icho chakanaka.
Zvinotaridza kwandiri kuti Debian 6 inoshandisa sehwaro inofanirwa kugadziriswa. Kwechinguva ikozvino ivo vakachinjira kuchikamu 7.
Uye injini yekutsvaga haisi tor. Tor ndiyo yekuchengetedza dura, sekutaura. Vanoshandisa Disconnect, iyo inoti inoshandisa injini yekutsvaga yeGoogle. Sezvazvaimboita neKutangaPage.
Nezve chengetedzo. unzwisise; kuti chete nekudzidza nezve nzira dzekutaurirana uye kumisikidzwa kwesoftware inoishandisa, zvinokwanisika kuburitsa (yakachengeteka) komputa yemushandisi wekomputa. GNU / Linux inzira yakanaka yekuinzwisisa, yakavhurwa sosi kana kodhi (tsime) yakavhurika (a), inopa iwo mukana.
Kugoverwa senge TAILS kunobatsira kwechokwadi kusvika pakuumbwa kwavo uye kodhi yakagovaniswa uye isina kuvanzwa kuseri kwenzvimbo inoyevedza kana yakanaka.
Pindura kune unaser-arch
Jonathan Proano akadaro
Yakanaka kwazvo chinyorwa chako. Icho chinongedzo chinoshanda kuti unzwisise iko kwekutanga kushandiswa kwesisitimu, uchitaura kuti iwe unoyambira muverengi kuti kwavo kuvanzika kunoenderana neruzivo rwavo rwezvakatipoteredza. Uye chokwadi chekuti iwe wakataura kuti chinobatsira vatori venhau kana mablogiki avo vanofanirwa kugovana ruzivo pachivande kubata kwakanaka, sezvo tichifanira kuramba tichikurudzira kushandiswa kwemidziyo yekuvandudza zvakavanzika nekuchengeteka paInternet. Zvikomborero.
Pindura Jonathan Proaño
Microsoft inopa Linux yeBig Data muMakore